Allgedo.com » 2012 » December » 07
Home » Archive Daily December 7th, 2012
Xildhibanka deegaanka Kamakunji oo ku dhaawacmay qarax cawa ka dhacay Islii
Wararka ka’imaanaya Magaalada Nairobi Gaar ahaan Xaafadda ay Soomaalida dagantahay ee Islii ayaa sheegaya in Caawo uu qarax ka dhacay Banaanka kore ee Masaajidka Al-Hidaaya. Sida wararku sheegayaan Xiligii Masaajidka la qarxinayay waxaa kusugna xildhibaanka deegaanka Kaamakunji Yuusuf Xasan Cabdi. Waxaa jira warar xaqiijinaya in dhaawac uu dhanka danbe kasoo gaaray xildhibaanka, loolana cararay isbitaalka...
Jowhar oo lagu jihaystay, dagaal soconaya iyo barakac ka socda magaalada
Wararka iminka naga soo gaaraya deegaanka Boorow ee Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowlada Soomaaliya ay iminka weerar ku qaadeen Magaalada Jowhar. Xaalada magaalada Jowhar ayaa kacsan waxaana ka taagan kala carar xoogan,iyadoo Alshabaab la sheegayo inay isaga carareen magaalada Jowhar. Wararkii ugu dambeeyay ee aan helayno ayaa sheegaya in ciidamada Alshabaab ay dagaal is difaacid...
Shabaab iyo dowlada oo ku dagaalamay xaafada Farajano ee magaalada Kismaayo
Sida ay sheegayaan wararka saaka aan ka helayno magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in habeenimadii xalay dagaalo ay ka dhaxeeyay ciidamada Alshabaab iyo kuwa dowlada Soomaaliya. Dagaalka ayaa ka dambeeyay ka dib markii Alshabaab ay weerar kusoo qaadeen fariisin ciidamada Raaskaambooni ay ku leeyihiin magaaladaasi Kismaayo. Xaafada Farjano oo ka mid ah xaafadaha magaalada...
Howlgalo lagu soo qabtay dad aad ubadan oo laga sameeyay Suuqa Bakaaraha
Wararka saaka aan ka helayno Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saaka halkaasi ay ka socdaan baaritaano ay sameynayaan ciidamada Booliska. Taliye ku xigeeenka ciidamada Booliiska ee suuqa Bakaaraha Gaashaanle Saciid Xasan Jimcaale , ayaa sheegay in saaka ay soo qabqabteen tiro dhalinyaro ah oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Alshabaab. Sidoo kale wuxuu sheegay in qaraxyadii...
Maandhow ha is dilin ana ha’i dilin! Fanaan caan ah oo maqaal yaab leh diyaariyay
Tusmo iyo tusaale tixmaal baa lehe, Abwaan Guure oo dilalka Soomaaliya ka dhex dhacayay u soo kuur galay, si qota dheerna uga soo baaraan degay, ayaa su’aal adag iska weydiiyay da’yartii dalka oo dabka ku hoobaneysa faldhaqankooduna uu noqday “iney is dilaan iyo iney wax dilaan un”, wuxuuna taa ka yiri:- Wiilashan is dilaayee Dilayaashu diraane Wedka dila ku rarane U dilaaya naftooda Dad...